စီးပြားေရး | Samfunnskunnskap.no
လျာထား (အနိမ့်ဆုံး) ဝင်ငွေခွန်ကြိုတင်နုတ်ယူမှု (Minstefradrag) ထက်ပိုမိုသည့်ဝင်ငွေရသော အလုပ်လုပ်သူတိုင်း အခွန်ဆောင်ကြသည်။ အခွန်ငွေအများစုက မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်သို့ပေးသွင်းပြီး အချို့ကို ခရိုင် နှင့် နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းသည်။
သက်ကြီးအငြိမ်းစား (ပင်စင်စား) နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ကာက နေ့တွက်စရိတ်ရယူသူများ နှင့် အခြားဖူလုံရေးခံစားခွင့် ယူနေသူများလည်း အခွန်ဆောင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများက နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ဆောင်ကြသည်။
ဝယ်ယူသမျှကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်လည်း နိုင်ငံတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ အခွန်ဆောင်နေကြသည်။ ထိုအခွန်ကို ရောင်းဝယ်ခွန် (mva. eller moms.) ဟု ခေါ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ရောင်းဝယ်ခွန်သည် ၂၅ % ဖြစ်ပြီး စားသောက်ကုန်အပေါ်တွင် ၁၄ % ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတခုအတွက် ငွေပေးချေလိုက်တိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ငွေ အနည်းငယ်ပေးသွင်းလိုက်ခြင်းပင်။ ရောင်းဝယ်ခွန် သည် နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးသော ငွေဝင်လမ်းပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်မှဝင်ငွေအားလုံး၏ ၂ဝ % ကို ရောင်းဝယ်ခွန်မှရသည်။
နော်ဝေ လူမှုဝန်ထမ်းလူ့ဘောင် ကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် လိုအပ်ချက်တခုမှာ တတ်နိုင်သမျှ နိုင်ငံသားအများစု အလုပ်လုပ်ပြီး အခွန်ဆောင်သည့်နည်းဖြင့် စနစ်ကြီးကို ပံ့ပိုးပေးနေရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေက ထွက်ငွေထက် များသင့်သည်။
နိုင်ငံတော်သည် လူ့ဘောင်အတွက် လူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ရှိသည် … ဥပမာ ဆေးရုံလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။ သို့သော် မြို့နယ်များက လူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အများဆုံးတာဝန်ရှိသည်။
အခြန္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
ေနာ္ေဝ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႕ေဘာင္ကို အဓိကအားျဖင့္ အခြန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္ခမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ကာ လည္ပတ္လ်က္႐ွိသည္။
လူမႈဝန္ထမ္းလူ႕ေဘာင္ႀကီး လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ေငြအလံုအေလာက္႐ွိေစရန္ အခြန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္ခမ်ားမွရေသာ ဝင္ေငြကို မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။